Global Aawaj | कांग्रेसलाई पहिलो, बुटवललाई सक्षम र समृद्ध नै मेरो लक्ष्य : सभापति पाण्डे कांग्रेसलाई पहिलो, बुटवललाई सक्षम र समृद्ध नै मेरो लक्ष्य : सभापति पाण्डे
कांग्रेसलाई पहिलो, बुटवललाई सक्षम र समृद्ध नै मेरो लक्ष्य : सभापति पाण्डे
१५ आश्विन, २०७८
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत असोज ९ गतेदेखि गाउँ-नगर तहको निर्वाचन प्रारम्भ भएको छ । यसैबीच रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका पनि असोज ९ गते निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । बुटवल उपमहानगरमा खेलराज पाण्डेले पुनःजिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । यस अगाडिनै २ पटक सभापति रहेका पाण्डे स्थानीय तहको निर्वाचनमा बुटवल उपमहानगर प्रमुखका प्रत्यासी पनि हुन् । कांग्रेसका प्रभावकारी नेताको पहिचान बनाएका पाण्डे तेस्रो पटक सभापति भएसँगै उनको थप चर्चा हुन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर ग्लोबल आवाजका लागि कांग्रेस बुटवल उपमहानगरका नवनिर्वाचित सभापति खेलराज पाण्डेसँग सुरज घिमिरेले गरेको कुराकानी :
भारी मतका साथ पुनः कांग्रेस बुटवल उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु भएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
-यस पटकको जिम्मेवारीलाई थप र अझै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको रुपमा लिएको छु । मलाई निरन्तर विश्वास र साथ दिएको अनुभूतिसँगै उहाँहरु र पार्टीप्रति गहन जिम्मेवारी थपिएको महसुस गरेको छु । नेपाली कांग्रेस बुटवललाई आगामी दिनमा पहिलो पार्टी कसरी बनाउने भन्ने एउटा सन्दर्भ योसँग जोडिएको छ । विगतका स्थानीय तहका निर्वाचनहरु, प्रदेश र संघीय निर्वाचनहरु हामी जित्न सकेनौं ,सफलता पाउन सकेनौं । त्यसैले अहिलेको १४ औं महाधिवेशनबाट हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका छौं । हाम्रो दायित्व, हाम्रो मुख्य लक्ष्य, उद्देश्य स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी सफल पार्ने, नेपाली कांग्रेसलाई कसरी पहिलो पार्टी बनाउने, निर्वाचनहरुमा कसरी कांग्रेसलाई जिताउने भन्ने रहेको छ ।
यस अगाडि तपाइँनै नेतृत्वमा रहँदा बुटवलमा कांग्रेस कमजोर देखियो । अर्कोतर्फ तपाइँ निरन्तर सभापतिमै हुनुहुन्छ । नगर छोड्न नसक्नु भएको वा अन्य कारण हो ?
-निर्वाचनमा मतका आधारमा कांग्रेस केहि पछाडि हो,कमजोर होइन। म सभापति भइरहँदा कांग्रेसलाई संगठित र शसक्त बनाउने अभियान निरन्तर रहयो । विभिन्न तहमा नेतृत्वमा नभएपनि हामी शसक्त प्रतिपक्ष हौं । र, भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं । पहिलो घर नबाईकिन छिमेकतिर हेरेर काम लाग्दैन् जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसकारण पहिलो मेरो दायित्व नेपाली नगरको नेतृत्व छोड्न नसक्नु वा माथिल्लो तहमा नजानु आवश्यकता अनुसार हुने कुरा हो । मेरो आवश्यकता यहीँ देखेरनै मलाई यहाँका जनताले निरन्तर जिम्मेवारी दिएको मैले ठानेको छु। पहिला घर बनाउने मान्यता र उद्देश्य अनुसार म लगाएतका पदाधिकारीहरुले कांग्रेसलाई बुटवलमा बलियो र पहिलो पार्टी बनाउने अभियानमा छौं ।
अघिल्ला कार्यकालमा नेतृत्वले सबैलाई समेट्न नसकेको,विशेषगरी युवा पुस्तालाई अगाडि सार्ने र प्रोत्साहन गर्नेमा कमजोर भूमिका रहेको गुनासो छ । यस विषयलाई कसरी लिई आगामी योजना बनाउनु भएको छ ?
-युवाहरुको सहभागिता र साथले नै पुनः नेतृत्वमा आएका छौं । सबैलाई समेट्न , युवाहरुले आशा गरेअनुसार पूरा गर्न नसकिएको होला । तर, हामीले प्रयास निरन्तर गरेका हौं,गर्छौ । यसभन्दा अगाडिको विधान फरक थियो । त्यसमा समावेशी बनेको थिएन। यूवाहरु आउने बाटो क्षेत्रीय प्रतिनिधिको संख्या अत्यन्तै कम थियो । अहिले कांग्रेसको विधान अत्यन्तै राम्रो छ । समावेशी ल्याउनको लागि कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले जेष्ठ नागरिक देखि यूवाहरुलाई महत्व दिएर अगाडि सारेका छौं । अहिले नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि, वडा तहमा अत्यन्तै समावेशी छ । धेरै यूवाहरु समेटिनुभएको छ । म आशा वादी छु । त्यसकारणले पनि अब नेपाली कांग्रेसले अहिलको महाधिवेशनले अगाडी आएका छौं । जुन खालको नेतृत्व स्थापित भएको छ । जुन खालको प्रतिनिधि आउनु भएको छ ।
सर्वसहमति अनुसार नभई नेतृत्वका लागि प्यानल प्रष्पिर्धाबाट आउनु भएको छ । गुटगत चुनावी प्रतिष्पर्धाले पराजित पक्षमा असन्तुष्टि र मनमुटाव देखिएला । लगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । त्यसबारे कसरी सोँच्नु भएको छ ?
– मैले चुनाव र प्रतिष्पर्धालाई प्यानल र विपक्षीको रुपमा लिइन । त्यो त मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता जस्तै थियो ,जुन जितेपनि मित्रवत रुपमै मानिन्छ । अन्तिमसम्म पनि सहमतिमै आउने प्रयास थियो । लोकतान्त्रिक दलमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास भएको ठानेको छु । कुनै पक्ष अगाडि र कुनै पक्ष पछाडि हुने अवस्था थिएन र छैन । हिजोपनि हामी एक थियौं,आज पनि भएका छौं र अगामी दिनमा पनि छौं । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन हामीबीच होइन हाम्रो एकतामा हामी अरुसँग लड्ने हौं त्यसका लागि हामी एक छौं ।
केन्द्रदेखि जिल्ला हुँदै नगरमै पनि गुट देखियो । पछिल्लो समयमा दुई गुटबीच प्रतिष्पर्धानै भएको छ । तपाइँको नेतृत्व र तहबाट एकता र गुटरहित कांग्रेस बनाउन कस्तो पहल हुनेछ ?
– लोकतन्त्र विधि अपनाएका देशहरुमा पक्ष–विपक्षहरु भइरहन्छ । त्यसलाई हामीले त्यति बेलाको चुनावी समयको निश्चित धारणामा मात्र हुनुपर्छ । कसैलाई दीर्घकालिन रुपमा अगाडी बढाउनु हुँदैन। निर्वाचमा लड्दा खेरी कुनै बाटोबाट जानुपर्ने भएकोले एउटा पक्षधर रहँदा, तथापि बुटवलको हकमा कुर गर्दा निर्वाचन पछि सो कुरा समाप्त भएर गएको छ । अधिवेशनबाट हामि जो–जो आएका छौं । हामी साँझा हौं । वार्डमा आएका साथिहरु वार्डको नेतृत्व साँझा हो । नगरमा आएको नेतृत्व पनि सबैको साझा हो । अब फलानो गुटको सभापति भन्ने रहँदैन । त्यसैले अभिवेशन रहँदा सम्म यो कुरा हुनु स्वभाविक हो । अधिवेशन सकिएपछि यी कुराहरु स्वतः समाप्त भएका छन्।
अधिवेशन अन्तर्गत सम्पन्न निर्वाचन वा सहमतिमा महिला सहभागिता नभएको वा न्यून भएको देखिन्छ । रुपन्देहीको कुनै तहमा पनि महिला नेतृत्व आएन नि ! साथै भातृ संगठनहरु सुस्त देखिन्छन् ,चलायमानका लागि कस्तो योजना छ ?
– महिलाको नेतृत्व नदेखिएपनि उपस्थिति कम हैन । ३३ प्रतिशत नभएसम्म कमिटि बनाउन मिल्दैन । त्यसैले पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । यदि कहिँकतै कमी भएमा हामी सहभागी गरानेछौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि केन्द्रदेखि सबै भातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्थाहरुको बारेमा फेरी पुर्नविचार हुनेछ । विधान अनुसार उनीहरुलाई अगाडि बढाउने काम हुनेछ । र, भातृ संस्थाहरुको जुन अधिकार हो, जुन स्वतन्त्रता हो । सोही अनुरुप नेपाली कांग्रेस अगाडि बढनेछ । केन्द्रकै नीति अनुसार बुटवलमा पनि काम हुनेछन्।
निरन्तर सभापतिसँगै आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा बुटवल उपमहागरको प्रमुखमा पनि प्रतिष्पर्धीको निरन्तरताको चर्चा छ । सो को लागि यहाँको के-कस्ता तयारी र योजना छन् ?
-मैले निरन्तरता भन्दा पनि पार्टी र जनताको चाहाना अनुसार हो । बुटवलको नेतृत्व र विकासका लागि म गम्भीर र सक्रिय हुँदै आएको धेरैलाई थाहा छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा सुकुम्बासी बस्ती लगाएतका समस्याहरु छन् । ज्योतिनगर आस–पासको पहिरो, तिनाउका समस्याहरु पनि छ । चौहारादेखि गोलपार्कसम्मको सडकका खाल्डा-खुल्डीहरु छन् । बेलबास-बेथरी सडकखण्डको समस्या छ । अरु विभिन्न ठाउँका समस्याहरु छन् । कृषिमण्डी, सब्जीमण्डी, अटोका समस्याहरु छन्। खानेपानीका समस्याहरु छन् । अरु विभिन्न ठाउँका सडका समस्याहरु छन् । बुटवल विकासको रुपमा जसरी अगाडि बढ्न पर्ने हो । यहाँको निर्वाचित जनप्रतिनिधिले त्यसरी अगाडी बढाउन सक्नु भएन कि भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ ।
आगामी दिनमा बुटवललाई देशकै सबैभन्दा समृद्ध र सक्षम उपमहानगरपालिका बनाउनको लागि हामीले आफ्ना विचारहरु ल्याउने छौं । के कारणले बुटवल पछाडि पर्यो, विचारहरु तपाइँको बीचमा राख्ने छौं । र, पार्टीका सबै साथीहरुको धारणा समावेश गरेर बुटवल विकासको लागि पछाडि पर्नुको कारण केके हुन् , त्यसको बारेका विज्ञहरुसँग पनि छलफल गर्ने छौं । र, हामीले आगामी दिनमा देशकै सबैभन्दा समृद्ध आर्थिक केन्द्र बुटवललाई बनाउनेछौं भन्ने बारेमा धारणा राख्ने छौं ।
यसै ग्लोबल आवाज अनलाइनमार्फत म सम्पूर्ण कांग्रेसहरुलाई पार्टीको शसक्तिकरण,सबलीकरण र बलियो तथा पहिलो शक्ति बनाउने प्रतिबद्धता गर्छु । साथै बुटवलबासीको चाहना अनुसार आवश्कता पूरा गरी समृद्ध बुटवल बनाउने अभियानमा सबै पक्षसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने र जनअपेक्षा पूरा गर्न निरन्तर अघि बढ्ने कुरा अवगत गराउन चाहान्छु ।